China eyebrow penzura makeup yakazvimirira chitaridzi inogara kwenguva refu vegan tsiye penzura micro pen fekitori uye vanotengesa | Iris Runako
eyebrow penzura yekushambadza yakavanzika chitaridzi inogara kwenguva refu vegan tsiye penzura micro peni
Ultra-yakanaka tip isina mvura mehendi yepenzura, yakatsetseka uye yakasviba. Penzura tsiye inokwevera vhudzi rakapetwa pahuma. Izvo chaizvo zvinotsanangudza ziso pahuma chimiro.
Vaka mabhurawuza akazara needu Ultra-yakatetepa Micro Eyebrow Penzura. Iyi penzura yepamberi penzura yakanyatsojeka, inopfekedza kunyangwe vhudzi rakanakisa rine ruvara rwekupera-kutaridzika.
Gadzira mamwe akatsanangurwa mabhurawuza nekuzadza mune mashoma, iwo akanyanya-akacheka matipi anokwevera mitsara yakajeka, ichikubvumidza iwe kuti ugadzire kutaridzika kwemavhudzi epamoyo epamoyo!
Maberere ako haazombotaridzika zvirinani mushure mekunge maazadza neiri yakasviba, ine pigmented micro Penzura yetsiye!
Item Zita Penzura yeseri
3. Smooth uye nyore kushandisa
4. Yakareba uye isina mvura
Pashure: vegan highlighter yakavanzika chitaridzi kugadzira tsika yakasarudzika dhizaini yakavanzika oem highlighter palette
eyebrow penzura yekushongedza yega chitaridzi
tsiye penzura micro pen
tsiye penzura yakavanzika chitaridzi
tsiye penzura yakavanzika chitaridzi tsika
penzura tsiye isapinda
chakavanzika chitaridzi eyebrow penzura
yakatetepa tsiye penzura yakavanzika chitaridzi tsika